Family – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
မိဘတွေကို သက်ရှည်ကျန်းမာစေချင်ရင် သူတို့ကို အချိန်များများပေးပါ
ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်က လေ့လာသူတွေက မိဘတွေရဲ့သက်တမ်းကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ရှည် အောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲ၊ သူတို့ကို ပိုပြီးကျန်းမာအောင်၊ ဘ၀အရည်အသွေးမြင့်တက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာ လေ့လာလိုက်တော့ မိဘတွေကို အချိန်ပေးပြီး ဂရုစိုက်ပေးပါတဲ့ . . အထီးကျန်တာကြောင့် မိဘတွေရဲ့ အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတိုးစေပြီး အသက်တိုစေပါသတဲ့။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်...
၉၂ နှစ်အရွယ်မိခင်ကို ၀က်ခြံထဲထားသည့်သားကြောင့် လူအများစုဒေါသထွက်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံက သားတစ်ယောက်ဟာ အသက် ၉၂နှစ် အရွယ်မိခင်ကို ၀က်ခြံထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်စေတာ ကြောင့် လူအများဒေါသထွက်နေကြပါတယ်။ ယန်လို့အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးကို သားနဲ့ချွေးမဖြစ်သူတို့က အစားအစာ၊ အ၀တ်အထည်လုံလုံလောက်လောက် မထောက်ပံ့တဲ့အပြင် ပုံမှန်ရိုက်နှက်ကာ အော်ဟစ်ငေါက်ငန်းလေ့ရှိပါတယ်။ ယန်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာဘ၀ကို...
သင့်ကလေးနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတာကြောင့်ဘယ်လို ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးရရှိနိုင်သလဲ. . .
သင့်ကလေးငယ်နဲ့အတူ အချိန်ဖြုန်းတာကြောင့် အောက်ပါကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ ဘာသာစကားနားလည်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု သဘောတရားကို ကလေးနားလည်စေပါတယ်။ သင်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပြေလျော့စေပါတယ်။ မိဘနဲ့သားသမီး သံယောဇဉ်ကို ခိုင်မြဲစေပါတယ်။ အံ့သြပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အမှတ်တရကောင်းတွေကို ဖန်တီးနိုင်စေပါတယ်။ ကလေးငယ်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်သွယ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ကလေးဟာ...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရွာတစ်ရွာမှာ အဘိုးအိုတစ်ယောက်က တစ်ယောက်တည်း နေထိုင်နေပါတယ်။ သူဟာ အာ လူးစိုက်ပျိုးချင်ပေမယ့် အလုပ်တွေကို ပင်ပင်ပန်းပန်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ သူရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသားသာ ထောင်မကျခဲ့ရင် ဒါတွေသူ့ကို ကူညီနိုင်မှာပဲလို့ အဘိုးအိုကတွေးပြီး သူ့လက်ရှိအခြေအနေကို သားဆီ စာတစ်စောင်ပို့လိုက်တယ်။ “...
အချိန်ပေးဂရုစိုက်ခံရသည့် မိဘများ အသက်ပိုရှည်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ မိဘတွေအပေါ် အချိန်ပိုပေး ဂရုစိုက်တာက သူတို့အသက်ပိုရှည်အောင် ကူညီပေးတယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေက သက်ကြီးရွယ်အို အထီးကျန်ဆန်တာဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းပြီး တချို့အခြေအနေတွေမှာ အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့က ပျမ်းမျှအသက် ၇၁...
နှလုံးကျန်းမာမှ မိသားစုရွှင်လန်းမှာ . . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မိသားစုထဲမှာ နှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ဦးရှိနေရင် အိမ်သားတွေအားလုံး မပျော်မရွှင်ဖြစ်ရ တတ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ နှလုံးရောဂါထဖြစ် မလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ရောဂါရှင်အလိုကျ စိတ်ချမ်းသာအောင် အမျိုးမျိုးကြံဆောင်နေရပါတယ်။ ဒီလို မဖြစ်စေဖို့ သတင်းကောင်းအနေနဲ့ နှလုံးရောဂါကာကွယ်နည်းတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ (၁)...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဒီနေ့ကင်ဆာကုသအောင်မြင်ထားသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ကင်ဆာဖြစ်တာကော ကုသပျောက်ကင်းတဲ့ ကာလပါ ကြာပြီဆိုတော့ သူကသိပ်ပြီး သေသေချာချာ မသိတော့ပါဘူး။ ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါအမျိုးအစား၊ အဆင့် နဲ့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံကုသမှုခံယူခဲ့တယ် ဆိုတာတွေကို မေးလိုက်တိုင်း...
မိန်းကလေး ဆံပင်၊ လက်သည်း အလှဆင်နည်းကို ဖခင်များအတွက် အခမဲ့သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပေးသည့် သမီးရှင်ဖခင်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဖလော်ရီဒါမှ ဖိလစ်မောဂိစ်က ဘ၀တူဖခင်တွေအတွက် သမီးမိန်းကလေး ဆံပင်အလှဆင်ထုံးဖွဲ့မှု သင်တန်းတွေ အခမဲ့ပေးဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ မိခင်မရှိတော့တဲ့ သမီးလေးကို ကိုယ်တိုင်ထိန်းကျောင်းနေရတဲ့ ဖိလစ်အတွက် အစပိုင်းမှာ ခက်ခဲခဲ့ပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွမ်းကျင်လာတာကြောင့် တခြားဖခင်တွေ...
ကလေးမွေးပြီးစ မိခင်များ အိမ်ထောင်မှုသုခ ရရှိစေရန်
၊ လရိပ်မေ ၊ အမျိုးသမီး အများစုဟာ ကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါ မွေးကင်းစကလေးကိုပဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ပြုစု စောင့်ရှောက်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့နဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကို အလေးထားဖို့ ပျက်ကွက်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ အိမ်ထောင်မှုသုခလျော့ကျမှု ဖြစ်လာတတ်တာကြောင့် ဒီလိုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ရာအတွက် သိထားသင့်တဲ့အကြောင်းတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ –...